Myanmar has agreed to the appointment of Ms. Andrea Faulkner as Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Commonwealth of Australia to the Republic of the Union of Myanmar – MINISTRY of FOREIGN AFFAIR
Myanmar has agreed to the appointment of Ms. Andrea Faulkner as Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Commonwealth of Australia to the Republic of the Union of Myanmar
The Government of the Republic of the Union of Myanmar has agreed to the appointment of Ms. Andrea Faulkner as Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Commonwealth of Australia to the Republic of the Union of Myanmar.
Ms. Andrea Faulkner was born on2January 1966. She received Bachelor of Music, Bachelor of Arts(Hons) and Diploma in Education from the University of Adelaide. She joined Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) in 1990 and served in various capacities at DFAT. She has been serving as Assistant Secretary in Sustainability and Climate Change Branch at DFAT since 2016.
She also served as First Secretary at the Australian Embassy in Paris, Deputy Head of Mission at the Australian Embassies in Hanoi and in Tel Aviv respectively.
Dated: 6th December 2018
ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်ဆိုင်ရာ သြစတြေးလျဓနသဟာယနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီးအဖြစ် မစ္စ အင်ဒရီရာ ဖော့ခ်နာအား ခန့်အပ်ရန် သဘောတူ
ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရသည် မစ္စ အင်ဒရီရာ ဖော့ခ်နာအား ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ဆိုင်ရာ သြစတြေးလျဓနသဟာယနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီးအဖြစ် ခန့်အပ်ရန် သဘောတူညီပြီးဖြစ်သည်။
မစ္စ အင်ဒရီရာ ဖော့ခ်နာကို ၁၉၆၆ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၂ ရက်နေ့တွင် မွေးဖွားခဲ့ပြီး၊ အက်ဒလိတ်တက္ကသိုလ်မှ ဂီတဘွဲ့၊ ဝိဇ္ဇာဘွဲ့ (ဂုဏ်ထူးတန်း) နှင့် ပညာရေးဆိုင်ရာဒီပလိုမာဘွဲ့ ရရှိခဲ့သည်။ ၁၉၉၀ ပြည့်နှစ်တွင် နိုင်ငံခြားရေးနှင့် ကုန်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနသို့ စတင်ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီး သြစတြေးလျနိုင်ငံ၊ နိုင်ငံခြားရေးနှင့်ကုန်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနတွင် အဆင့်အသီးသီး၌ တာဝန်ထမ်းဆောင် ခဲ့သည်။ ၂၀၁၆ ခုနှစ်မှစတင်၍ ယခုအထိ နိုင်ငံခြားရေးနှင့် ကုန်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ စဉ်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေးနှင့် ရာသီဥတု ပြောင်းလဲမှုဆိုင်ရာဌာနခွဲတွင် လက်ထောက်အတွင်းဝန်အဖြစ် တာဝန် ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။
သူမသည် ပါရီမြို့၊ သြစတြေးလျသံရုံးတွင် ပထမအတွင်းဝန်အဖြစ်လည်းကောင်း၊ ဟနွိုင်းနှင့် တဲအဗီးလ်မြို့များရှိ သြစတြေးလျသံရုံးတွင် ဒုတိယသံရုံးအကြီးအကဲအဖြစ်လည်းကောင်း အသီးသီးတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။
ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၆ ရက်